3 Solutions si ay u gudbiyaan Photos, Music, Videos iyo More ka iPad in Samsung
Damacsan tahay in ay photos, music, videos oo dheeraad ah oo ka iPad wareejiyo ah Samsung telefoonka ama kiniin cusub aad soo iibsatay, sida Note Samsung 3? Sidee aad ku gaari kartaa? Agabka ugu horreeya in Ifo maskaxdaada laga yaabaa in Lugood, sababtoo ah Lugood kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan iibsaday music iyo videos dib, waxa uu. Maxay ku saabsan kuwa aan iibsaday goolka khayraadka kale? Maxaa dhacaya haddii aad sidoo kale doonayaan in ay u gudbiyaan sawiro, xiriirada, iyo xataa barnaamijyadooda? Xayiran Iska? Ha welwelina, Halkan yimaado xarunta khayraadka oo aad bixisaa xalal badan si loo gaaro kala iibsiga iPad in Samsung.
3 Solutions oo ku saabsan sida ay u gudbiyaan Data ka mid iPad in Samsung
Laakiinse dhawr daqiiqo;
Music, video, sawiro iyo xiriirada loo gudbin karaa si isku mar ah;
Non-iibsaday music iyo video uma wareegi karo.
Qaar ka mid ah music video iyo in aan lagu ciyaari karo ka dib markii ay kala iibsiga
Ma u baahan tahay xisaab Google
Xalka 1: Sidee si ay u gudbiyaan Media / Xiriirada / Text ka iPad in Samsung la MobileTrans
Xalka 2: Sida loo dhaqaaq Music / Video ka iPad in Samsung la Lugood
Xalka 3: Sida loo Copy Xiriirada ka iPad in Samsung la Google Account / iCloud
IPad Bedelka in Samsung, Sidaas Easy
Ayaa qalab kala iibsiga phone awood badan waxay ka caawisaa in xogta laga jir iPhone ku wareejiyo iPhone cusub ee 1 click!
Bedelka oo dhan photos, jadwalka iyo xiriirada aad iPad in phone Samsung ama kiniin ah ee click hal.
Beddelaan iyo wareejiyo iPad music video iyo in Samsung qaabab socon.
Si fiican u shaqeeyaan iPad hawada, mini2 iPad, Samsung S4, S3, Note 3, iyo in ka badan .
100% wareejinta xogta iyo verus-free.
Xalka 1: Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga iPad in Samsung la MobileTrans
Tallaabada 1 Connect Your iPad iyo Samsung Device in Computer ah
First of dhan, abuurtaan Wondershare MobileTrans iyo xiriiriyaan iPad iyo Samsung in computer.The ka MobileTrans suuqa kala baxa, kaas oo aad riixi kartaa Start si ay u muujiyaan furmo suuqa kala iibsiga iPad in Samsung.
Fiiro gaar ah: Lugood in lagu xiro si ay u hubiyaan Wondershare MobileTrans uu shaqeynayo waajib ah.
Tallaabada 2. Isku Your iPad iyo Samsung Device in Computer ah
Connect aad iPad iyo Samsung in kombiyuutarka. The Wondershare MobileTrans iyaga lagu ogaan doonaa si toos ah iyo u muujiyaan in uu furmo.
Tallaabada 3. Switch iPad in Samsung
Dhammaan xogta ay taageerayaan yihiin saxday. Guji Start Copy si ay u bilaabaan kala iibsiga xogta. Bar horumarka A ee wada hadal pop-up kuu sheego Boqolkiiba kala iibsiga xogta. Marka wareejinta xogta ka baxayo, xogta iPad oo dhan ayaa la soo bandhigi doonaa qalab Samsung.
Qoraalka laga soosaaray Wondershare MobileTrans ka iMessage oo iyaga loogu badalo in ay SMS iyo markaas badbaadin qalab Samsung.
Xalka 2: Sida loo dhaqaaq Media ka iPad in Samsung la Lugood
Talaabada 1: Burcad Lugood iyo guji Store.
Talaabada 2: In la jiido menu-hoos, dooran ogolaato Computer Tani ... In wada hadal pop-up ah, buuxi ID Apple iyo password in aad isticmaasho si aad u iibsato music iyo video aad.
Talaabada 3: Guji Edit > Tixraacyada ... > Advanced > sax Hayso Lugood warbaahinta folder abaabulan iyo Copy files si Lugood warbaahinta folder markii isagoo intaa ku daray in maktabaddu
Talaabada 4: bareesada in USB ah cable Apple in ay ku xidhmaan aad iPad in kombiyuutarka. Muddo ka dib, aad iPad la soo bandhigi doonaa hoos AALADAHA .
Talaabada 5: midig u guji aad iPad iyo liiska hoos-hoos u soo baxa. Dooro Iibsasho Transfer . Markaas, sug ilaa habka gudbinta dhammaado.
Talaabada 6: kombiyuutarka, falgali in Lugood warbaahinta folder badbaadiyey on: C: \_ Users \_ Maamulaha \_ Music \_ Lugood \_ Lugood Media. Dhammaan files warbaahinta iibsaday iyo soo bixi Lugood yihiin halkaas iska nabadgeliyey.
Tallaabo 7: Isku aad Samsung telefoonka ama kiniin in kombiyuutarka adigoo isticmaalaya cable USB ah. Fur card SD ay. Copy iyo paste music ka iibsaday iyo videos in Lugood Media si aad Samsung telefoonka ama kiniin.
Xalka 3: Sida loo Copy Xiriirada ka iPad in Samsung la Google / iCloud
On aad Samsung telefoonka ama kiniin ah, tuubada Goobta . Hoos shaashadda si aad u hesho xisaabta & hagaagsan . Raadi iyo saxiixa in aad xisaabta Google. Tubada nidaameed Hadda si hagaagsan Google xiriir la leh aad Samsung telefoonka ama kiniin.
Si kastaba ha ahaatee, dhammaan taleefanada aan Samsung ama kiniiniga dhisay-u hagaagsan Google. Xaaladdan oo kale, waxaad u dajiyaan karaa VCF si aad Samsung telefoonka ama kiniin la Google ama iCloud. Halkan, waxaan iCloud ka qaadan sida tusaale.
Talaabada 1: Burcad www.icloud.com internet-ka. Gasho xisaabtaada. Riix Xiriirada inay soo galaan suuqa kala xiriir maamulka ah.
Talaabada 2: Dooro group xiriir ah oo guji icon ku yaalaa koonaha bidix ee hoose iyo dooran dhoofinta vCard ...
Talaabada 3: bareesada in an cable USB Android in ay ku xidhmaan aad Samsung telefoonka ama kiniin in kombiyuutarka. Fur Samsung folder card SD iyo jiidi oo hoos u dhoofiyo iCloud vCard in ay.
Talaabada 4: Adiga Samsung telefoonka ama kiniin ah, u tag Xiriirada app oo guji menu. Markaas, dooro Import / Dhoofinta > Import ka kaydinta USB . File vCard ayaa si toos ah synced doonaa liiska xiriir ah.
Nuqul Faylal ay ka iPhone in iPad
Bedelka iPod Music inay iPad
Xogta laga iPhone Bedelka in Samsung
Faylal ay Bedelka in Samsung la Samsung Kies
Ku rakib / Update / uninstall Samsung Kies on Mac
> Resource > iPad Photos> Transfer, Music, Videos iyo More ka iPad in Samsung